Maxaan ugu talo galnay akhristayaasheena sharafta badan? Jawaabta, qisooyin jaceyl ah oo macaan qaasatan Qiso jaceyl oo gaaban. Waxaan shaki ku jirin inaan had iyo jeer u taagnaan doono tixgelinta codsiyada inooga yimaado akhristayaasheena sharafta badan si ay uga faaiidaan qormooyinka xiisaha leh ee aan ugu talo galnay. Halkani waxaan ku soo bandhigi doonaa qiso jaceyl oo taxane ah qeybtii koobaad. Inaad akhrisato qiso jaceyl ah kaama saacidi doonto oo kaliya akhrinta qoraa